‘लुट्न सके लुट् कान्छा..‘ गीत युट्युबबाट हट्यो, पशुपति शर्माले लेखे यस्तो स्टाटस [स्टाटससहित] – जलजला अनलाइन
Posted on February 16, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on ‘लुट्न सके लुट् कान्छा..‘ गीत युट्युबबाट हट्यो, पशुपति शर्माले लेखे यस्तो स्टाटस [स्टाटससहित]
फागुन ४, काठमाडौं । गायक पशुपति शर्माको नयाँ गीत‘लुट्न सके लुट् कान्छा..’ सार्वजनिक भएको दोस्रो दिन युट्युब च्यानलबाट हटेको छ ।
शर्माको युट्युब च्यानलमा शुक्रबार सार्वजनिक भएको गीत शनिबार नेपालको युट्युब ट्रेन्डिङमा १० औं नम्बरमा परेको थियो ।
उनले फेसबुकमा राखेको स्टाटस जस्ताको तस्तै
यसअघि आएको समाचार यस्तो छ
पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट’ गीतले बालुवाटारमा खैलाबैला, अब के होला ?
चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट नेपालमै हो छुट’ बोलको व्यङ्ग्यात्मक गीतले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
गीतमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति पनि कडा व्यङ्ग्य गरिएको छ । काम केही नगरेको, ठूला–ठूला भाषणमात्र गरेको, स्वर्ग जस्तो देशमा ‘यमराजको शासन’ चलेकाे जस्ता शब्द गीतमा प्रयाेग गरिएपछि सरकारले उक्त गीतमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बारे छलफल चलेकाे स्रोतले बतायो ।
यो गीतका विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र समेत छलफल भएको स्रोतले बतायो । गीतमा सरकारका काम कारवाहीका साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत व्यङ्ग्य गरिएको छ ।
गीतको सुरुमै गायक शर्माले भनेका छन् –‘पञ्चायत सुनेँ, बहुदल र गणतन्त्र भोगेँ, तर देश र जनताको निःस्वार्थ रुपले माया गर्ने न त नेता भेटे नत अरु कोही…. त्यसैले भन्न मन लाग्यो लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट, अरु देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट ।’
गीतको अभिनयमा गायक शर्मा, प्रज्ज्वल भण्डारी र मञ्जु विक देखिका छन् ।
११ वर्ष कान्छा प्रेमीसँग प्रियंकाले गरिन् इन्गेजमेन्ट
Posted on July 28, 2018 Author Jaljala Online
साउन १२, काठमाडौँ । विदेशी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अभिनेत्री एवम् पूर्व विश्व सुन्दरी प्रियंका चोपडाले निक जोनाससँग ‘इन्गेजमेन्ट’ गरेकी छन् । गत वर्ष यी दुबैको न्यूयोर्कमा भेट भएयता सम्बन्ध बाक्लिदै गएको थियो । यस वर्ष प्रियंकाको जन्मदिनबाट यी दुईको सम्बन्ध अर्को तहमा पुगेको हिन्दुस्तान टाइम्सको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ । हिन्दुस्तान टाइम्सले पिपल डटकमको हवाला दिँदै […]
दाङकी क्रान्तिशिखाले मिस ग्लोवल इन्टरनेशनल २०१८ को उपाधि जितिन्
Posted on March 20, 2018 Author Jaljala Online
चैत ६, दाङ । दाङकी क्रान्तिशिखा धितालले मिस ग्लोवल इन्टरनेशनल–२०१८ को उपाधि जितेकी छन् । घोराही निवासी धिताले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौंमा हाल बस्दै आएकी छन् । पहिलो पटक यस प्रकारको प्रतियोगितामा सहभागि भएकी धितालले नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतियोगितामा सहभागि १५ जना प्रतियोगिलाई पछाडि पार्दै उपाधि जितेकी हुन । प्रतियोगिताका लागि सुरुको […]
‘मन बिनाको धन ठुलो’ गीत अब चलचित्र ‘धूम ३’ मा (भिडियोसहित)
Posted on August 7, 2018 Author Jaljala Online
साउन २२, काठमाडौं । पछिल्लो समय निकै नै भाईरल भएर बिवादमा समेत आएको “मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन” गीत अब चलचित्रमा पनि सुन्न र देख्न पाईंने भएको छ । नायक जय किशन बस्नेतले पछिल्लो समय निर्माण गरेर हाल पोष्ट प्रोडक्सनको अन्तिम चरणमा रहेको चलचित्र “धूम ३” मा समावेस गरिने भएपछि उक्त गीतलाई […]